Baro Diyaaradda Qaabka iyo Xakamaynta Raadiyaha - Ikkaro
Adduunyada diyaaradaha dayuuradda iyo xakamaynta raadiyaha. Waligayba waxaan jeclaa adduunkan aan doonayo inaan dib ula noqdo.
La soco taxanaha si aad u sameysato diyaarad Drone ah oo adiga kuu gaar ah.
Qeybtu waa mid waqtigeedii dhacay, waa inaan sii wadnaa ka hadalka helikabtarrada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo dhammaan noocyada aaladaha aan ku dhisi karno gudbiye, qaybo kooban iyo male iyo aqoon badan.
Qaybta iyo hagayaashu waxay u adeegi doonaan horudhac adduunkan xiisaha leh, hiwaayadda ama balwadda, wax kastoo aad rabto inaad ugu yeedho.
Waxaan iftiimineynaa Hovercrafts ama hovercraft
Ha u maleynin inay tahay wax fudud, laakiin talaabo talaabo talaabo ah ayaa kaa caawin doonta.
Gawaarida Cirin RC oo ay ku shaqeysanayaan xargaha caagga ah
Si lama filaan ah ayaad u aragtaa iyaga oo aad u jeclaatay muuqaalkooda. Sababtoo ah way qurux badan tahay, aad bay u qurux badan tahay oo markaad bilowdo inaad eegto oo aad aragto waxa ay awood u leedahay, waxaad kaliya dooneysaa inaad mid yeelato, midna ka dhig sidaas oo kale.
Magaceedu waa Cirin, waa a Baabuur ay kontorool ku shaqeysato balastarro. baytariyo maleh, aad ayey ufiicantahay inaad dhahdo waa tamarta laastikada, laakiin xaqiiqda waa xarago caag ah 4,5 mitir.
"Mashiinka" kani uma muuqdo inuu nasiinayo xiiso badan. Laakiin Cirin wuxuu awood u leeyahay inuu ku dhowaad 50 km / h xawaare sare ku socdo wuxuuna ku safri karaa qiyaastii 150 mitir, maahan madaxbannaani badan, laakiin waa wax ka badan wixii aan ka filayay gabal caag ah. Waxa aniga i cajabiyay waa xawaaraha ugu sarreeya, waa wax cajiib ah.
Iyada oo naqshad dhiirigelin leh sida ay leedahay Max Greenberg, mid ka mid ah hal abuureyaasheeda, sanadkii 1950 gawaarida tartanka iyo lafaha shimbiraha.
Hordhaca helikabtarrada korontada ku shaqeeya
Waxaan bilaabayaa taxane taxane ah oo loogu talagalay helikabtarrada korontada RC.
Sida dayuuradaha diyaaradahaHorumarka tikniyoolajiyadda iyo soo saarista Shiinaha oo ka jaban kana raqiisan, helikabtarrada RC ayaa si aad u macquul ah lagu qiimeeyay. (Ama ugu yaraan, sida diyaaradaha oo kale, niyad jab kama qabno haddaan shilno).
Inta badan taxanahan waxay noqonayaan isku imaatinka diyaarad helikobtar ah oo dhex-dhexaad ah (70 cm rotor dhexroor ah), oo aan ku soo bandhigi doono talaabo talaabo. Sababaha doorashadan waa kala duwan yihiin, tan ugu weynna waa qiimaha, maadaama xirmada jiifka ee ka muuqata sawirka ay ku kacayso oo keliya 8 euro.
Diyaarad Model ah, dhisida IKKARO 002, hordhac.
Waxaan bilaabi doonnaa dhismaha nooc kale oo koronto ah, Ikkaro 002.
Aniga oo ilaalinaya ruuxda boggan, waxaan u isticmaali doonaa in ka badan qalabka caadiga ah, kartoonada, oo ka soo baakadaysan alaabta guryaha ee Ikea iyo ul iyo nus ka mid ah xaaq, (oo ka samaysan aluminium).
Muuqaalka hadda ee taranka waa sida soo socota,
Fool xun, haah?
cunt noocooda koowaad in aan sameynay, duulimaadku wuxuu ahaa mid ka yar ama ka yar oo dammaanad ah, sababtoo ah miisaanka yar ee qalabka, dusha sare ee baalasha iyo mootooyinka la isticmaalay.
Waxaan kugula talinayaa casharka diyaaradaha qumaatiga u kaca. Waxaad hubtaa inaad sidoo kale jeceshahay.
Hordhaca diyaaradaha nooca korontada ku shaqeeya. Dhis Ikkaro001
Waxaan bilaabayaa taxane ku saabsan diyaaradaha korontada ku shaqeeya, had iyo jeer waxaan ka imanayaa ruuxa degelkan. Xalalka dhaqaalaha iyo tijaabinta, iyo waliba tabobarrada sababta loo sameeyo iyo sida ay wax u shaqeeyaan. Waxaan sharxi doonaa qalabka aasaasiga ah, qaybaha kala duwan iyo sida looga faa'iideysan karo agabyada kala duwan ee maalinlaha ah ee soo saarista diyaaradaha dayuuradaha ah.
Haddii taadu tahay helicopters, waxaan kuu daynayaa cashar kale oo aad ku kabi karto a Hordhaca helikabtarrada korontada ku shaqeeya.
Kala-goynta afar gawaarida wadista gawaarida miisaanka
Maalin dhaweyd ayaan taleefanka ka xirnay Qarxay aragtida ah gaariga loo yaqaan 'sclextric or slot slot'. Sidii aan soo sheegay anigoo ujeeddadu tahay inaan arko sida ay u dhisan yihiin inay iga dhigaan mid, oo leh 4-giraangir iyo laba matoor.
Hagaag, aniga oo sii wada raadinta macluumaadka aan kala diray Peugeot 307 WRC de cabirka, waxay u iibiyaan sida wadid 4.